မြို့သစ်မြို့တွင်း၌ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းကို ကတ္တရာထပ် ပိုးလွှာခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွ? - Yangon Media Group
မကွေး၊ ဇူလိုင် ၁၂
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့သစ်မြို့တွင်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအား ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်း ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ထုထည်တိုးမြှင့် ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၉ ရက်မှစတင်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါမြို့သစ်မြို့တွင်း မူလအကျယ် ၁၈ ပေ၊ အရှည်ပေ ၁ဝဝဝ ရှိ ကတ္တရာခင်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအား ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း၊ ထုခုနစ်လက်မအထိ တိုးမြှင့်ခြင်းလမ်း လုပ်ငန်းများကို စည်ပင်သာယာရေး ရန်ပုံငွေ ၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် (မီနီဘတ်ဂျက်) ဒုတိယသုံးလပတ်လုပ်ငန်း ဘတ်ဂျက်ငွေ ကျပ်သန်း ၂ဝ ခန့်ဖြင့် စတင်လုပ်ဆောင်ပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းတွင် ပြီးစီးမည်ဟု ခန့်မှန်းထား ကြောင်း မြို့သစ်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
လမ်းဘေးဝဲယာမှာရှိတဲ့ လူ နေအိမ်၊ ဈေးဆိုင်ခန်းနေ ပြည်သူများအား လမ်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဇူလိုင် ၁ဝ ရက် ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် မြို့သစ် မြို့ ရွှေဘုံသာကျောင်းတိုက်ဓမ္မာရုံ၊ ဈေးရပ်ကွက်တွင် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်း ဆွေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးသာအောင်၊ မြို့နယ်အုပ် ချုပ်ရေးမှူး ဦးဟိန်းသူဝင်းနှင့် မြို့ နယ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ က အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
”ယခုလို မြို့တွင်းဗိုလ်ချုပ်လမ်းကို ထုထည်တင်ကတ္တရာထပ် ပိုးလွှာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရတာကလည်း ပြည်သူများသွားလာမှုအဆင်ပြေစေဖို့ မြို့အင်္ဂါရပ်နဲ့အညီ သွားလာမှုအဆင်ပြေ စေရေး ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ ဦးဗိုလ်ဌေးက ပြောသည်။ အဆိုပါလမ်းလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ အချိန်မီပြီးစီးရေး အလေးထားကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း မြို့သစ်မြို့စည်ပင်သာ ယာရေးဦးစီးဌာနမှ အမှုဆောင်အရာရှိ ဦးဆန်းဝင်းက ပြောကြားသည်။
ဘောလ်တန်အား အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းမှာ ရှ??
ယာဉ် အသွားအလာများပြီး လူစည်ကားလာသည့် ဟားခါးမြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးကို ငွေကျပ်သန်း ၂ဝဝဝ